FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA BOYKIN SPANIEL DOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika Boykin Spaniel Dog
Jackson the Boykin Spaniel, sary nahazoana alàlana avy amin'ny Pawleys Island Boykins
Ny Boykin Spaniel dia manana loha karazana Espaniolo. Voapetaka ny rambony. Ny palitao tsy tantera-drano dia somary miforitra na olioly, fa ny palitao malama dia azo ekena (ny mpihaza dia miahy bebe kokoa ny fahaiza-mihaza alika noho ny karazany ny palitao). Ny aty dia aty na volontany. Ny Boykin dia lehibe kokoa noho ny Cocker Spaniel, misy sofina kely kokoa sy ambony kokoa izay rakotra volo lava sy lava be. Tsy dia be volo izy ary volo henjana kokoa.
Mahafinaritra sy mahafehy ary mankatò, namana manan-tsaina sy mahatoky, ny mason'ireo marika mavo / amber izay mibanjina ny masonao dia matetika no lazaina toy ny hoe manontany ilay alika hoe: 'Inona no tianao hataoko manaraka?' The Boykin Spaniel dia mpilomano mahafinaritra. Ankafizin'izy ireo ny rano sy ny lomano nefa mora tratran'ny aretin-tsofina Spaniel izy ireo ary tokony ho maina tsara rehefa avy lena. Ny ankamaroan'ny tompona dia mitatitra fa ny tsirairay amin'ireo alika ireo dia samy manana ny mampiavaka azy ary manana fahaiza-manao mafana fo tsy fahita firy amin'ny alika hafa. Ny orony tsara sy ny hafanam-pony any an-tsaha no mahatonga azy a mpihaza marobe . Nihalehibe izy ireo ho mpihaza Espaniôla ary manana orona tsara be. Ny fofon'izy ireo dia mety hitarika azy ireo amin'ny fitsangatsanganana raha avela hivezivezy mitarika. Mila tompony ity alika ity izay mampiseho fitarihana natoraly foana mifandray amin'ny alika inona no antenaina aminy sy izay tsy.
Hahavony: 15 - 18 santimetatra (38 - 46 cm)
Ny olana ara-pahasalamana mahazatra indrindra dia ny dysplasia hip, ny olana amin'ny maso toy ny katarakta, ary ny tsipika maromaro eto an-toerana dia manana olana amin'ny fo sy ny hoditra. Mora voan'ny aretin-tsofina.
Ny Boykin Spaniel dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha ampiasaina tsara. Tokotany kely dia ampy.
Ny Boykin Spaniel dia alika miasa ary mila manao fanazaran-tena isan'andro, ao anatin'izany ny lava sy mailaka mandeha isan'andro , izay alehan'ny alika eo akaikinao na ao aorianao tsy eo alohany mihitsy, toy ny ao an-tsain'ny alika, mpitarika fonosana mandeha aloha. Manana drive lavitra izy ireo ary tena vonona. Alika mavitrika izaitsizy ity izay mila fanatanjahan-tena sahaza sy 'asa' hatao isan'andro handoroana angovo sy hampiasana ny sainy malay tokoa. Ho hitan'izy ireo fomba hampialana voly ny tenany raha tsy nomen'ny tompony ary mety hanimba be rehefa mankaleo na rehefa tsy tanterahina ny fahatsaram-panahin'izy ireo voalohany.
Malagasy Cocker spaniel poodle Mix
Ankizy 5 - 7 eo ho eo
Mitaky miborosy isaky ny andro vitsivitsy hisorohana ny fikolokoloana palitao. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Fotoana kely taorian'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, Alexander White avy any Spartanburg, South Carolina, dia nahita alika kely karazana Espaniôla somary mena nirenireny taorian'ny fotoam-piangonana. Toa nania ilay alika ary nanapa-kevitra ny hitondra ilay alika mody any aminy izy. Hitany fa tena mahay mihaza ilay alika. Ity mpandeha ity dia nanana fahatsapana vorona mahafinaritra. Natolotr'i Alexander ilay mpihaza nihaza tamin'i L. Whitaker Boykin. Lehilahy io alika io ary nomena anarana hoe 'Dumpy.' Ny karazana Boykin Spaniel dia nivoatra avy tamin'ity alika iray ity, miaraka amin'ny lakroa mankany Espaniola amerikana rano , Springer Spaniels , mpanondro SY Chesapeake Bay Retrievers . Izy io dia ampiasaina ho toy ny vorona matevina miakatra vorona ary koa vorona rano. Ny Boykin Spaniel dia malaza any amin'ny faritra atsimon'i Etazonia amin'ireo mpihaza vorona. Ny fiaviany niaviany dia South Carolina, Etazonia, izay nanendry ny Boykin Spaniel ho alika ofisialy. Tamin'ny volana Jolay 2005 ny Boykin Spaniel Club of Breeders Assoc. an'i Amerika dia nantsoin'ny AKC ho klioba ofisialy ofisialy. Ny Boykin Spaniel dia karazany AKC FSS (Foundation Stock Service) nandritra ny taona maro. Ny BSCBAA dia nanolotra ny antontan-taratasiny tany amin'ny AKC mba handrosoana ao amin'ny vondrona miscellaneous ary nankatoavina tamin'ny 9 febroary 2007 tamin'ny datin'ny 1 janoary 2008. Manantena ny mpiompy fa hamindra ny karazany avy amin'ny kilasy misimisy AKC mankany amin'ny vondrona fanatanjahantena atsy ho atsy .
Atsinanana Region terrier sy ny Maltais Mix
BSS = Fikambanan'ny Spaniel Boykin
BSCBAA - Boykin Spaniel Club of Breeders Assoc. an'i Amerika
Daisy the Boykin Spaniel amin'ny maha alika azy amin'ny 16 herinandro— 'Tian'i Daisy ireo ravina ireo. Mitsambikina ao anaty antontany mandra-panjavony tanteraka izy, avy eo mitsambikina ary mijery anay toa miteny hoe: 'Inona?' Angovo avo ... izahay MANDEHANA farafahakeliny 2 kilaometatra isa-maraina orana na tara-pahazavana, manenjika ny baoliny mandra-leo ahy manipy azy, avy eo kilometatra iray miampy tolakandro. Fitiavana, ratsy toetra ary mavitrika izy, azo antoka fa mitazona antsika roa ho be atao.
Boykin Spaniels Jackson sy Daisy, sary natolotry ny Pawleys Island Boykins
Fako alika kely avy any Boykin Spaniel miaraka amin'ny renin'izy ireo, sary avy amin'ny Pawleys Island Boykins
ny fako alika kely Boykin Spaniel , sary natolotr'i Pawleys Island Boykins
UWPO UWPCH GRCH Hollow Creek's Gus CGC aka Gus, United Kennel Clubs '1 Boykin Spaniel an'ny Premier 2004
Levi the Boykin Spaniel puppy amin'ny 10 herinandro
Levy zanak'alika Spaniel Boykin amin'ny 12 herinandro
Levi the Boykin Spaniel puppy amin'ny 19 herinandro
Levi the Boykin Spaniel amin'ny 1 taona
Hijery ohatra hafa momba ny Boykin Spaniel
Sary Boykin Spaniel 1
alika boxer amin'ny 8 herinandro
lisitry ny karazana alika rehetra az
fifangaroana poodle fenitra retriever volamena